टाइगर ३ फिल्म बलिउडको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै बजेटमा बन्दै,कति हुनेछ लगानी ? - हिपमत
टाइगर ३ फिल्म बलिउडको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै बजेटमा बन्दै,कति हुनेछ लगानी ?
बलिउड सुपरस्टार सलमान खानका फ्यान्स उनको फिल्मको प्रतिक्षामा लामो समयदेखि बसिरहेका छन् । बक्स अफिसमा उनको फिल्मले राम्रो प्रदर्शन गर्दछ । अहिले सलमान खान आफ्नो सुपरहिट सिरिज टाइगर ३ लाई लिएर चर्चामा छन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार टाइगर ३ मा पनि सलमान र क्याट्रीनाको जोडी रहने बताइएको छ । तर यशराज फिल्मले अहिलेसम्म यस फिल्मको बारेमा केहि घोषणा गरिसकेको छैन । तर टाइगर ३ फिल्म बम्पर बजेटमा बन्न लागेको बताइएको छ ।
जसपछि यो फिल्म बलिउडको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै बजेटको फिल्म बन्नेछ । यो फिल्ममा सलमानलाई १०० करोड रुपैयाँ दिन लागिएको छ ।
यो फिल्म विश्वका ७ वटा देशहरुमा शुटिङ गरिने बताइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :अहिलेको सयममा मानिसका लागी मोवाइल फोन अपरिहार्य बनिसकेको छ । यो मानव जीवनको अभिन्न अं ग समेत बनिसकेको छ ।जसका कारण मानिस चाहे जहाँ जुनै परिस्थितिमा किन नहोस् उसको अधिका शं समय मोवाइलमा नै बित्ने गर्दछ । तर हरहमेशा मोवाइल साथमा रहदाँ यसले मानिसलाई नकारा त्मक असर पुर्याउँछ ।
अझ सुत्दा मोवाइल साथमा लिनेहरुमा यसको प्रत्यक्ष ठुलो असर पर्दछ । मोवाइल फोन साथमा लिएर सुत्दा हुने हानी यसप्रकार छन् ।१. मोवाइल फोनको ब्याट्रिबाट लिथियम–आयन लगायतका सयभन्दा बढी वि षालु ग्याँस निस्कने गर्दछ । जसले मानव स्वास्थ्यमा नकारा त्मक अस र पुर्याउँछ ।
२. मोवाइलको ब्याट्रिबाट कार्बोन मोनोअक्साइड ग्यास पनि निस्कन्छ यसले आँखा, छाला र नाकमा जलनको सम स्या उत्पन्न गराउँछ ।३. फोन संगै लिएर सुत्दा नोटिफिकेसन तथा अर्लट टोनले निन्द्रा पर्याप्त हुन पाउदैन ।४. स्मार्टफोनबाट दर्जनौं खत रनाbक ग्याँस उत्पन्न हुने भएकाले सँगै लिएर सुत्नु हुदैन ।५. स्मार्टफोन संगै लिएर सुत्दा वा चार्ज राखेर सुत्दा कुनै बेला पनि ख तरा निम्तन सक्छ